Kaka Oo Soo Xushay Waayihiisa Ugu Fiicnaa & Kuwii Ugu Xumaa Kooxihii Uu Kusoo Kala Qaatay %
Ciyaaryahankii hore ee kooxaha Real Madrid, AC Milan, Brazil iyo kuwa kale oo badan, ayaa wuxuu sheegay in waqtigiisii ugu fiicnaa uu ku qaatay kubada cagta sanadkii 2007, markaasoo uu koobab iyo bilado shaqsi ah uu hantay.
Kaka ayaa wuxuu iska siibay kabaha kubada cagta sanadkaan 2018, gaara ahaan bishiisii koowaad ee Janaayo, waxaana hada uu ku nool yahay dalkiisa Hooyo ee Brazil, isagoona waqti la qaadanaya xubnaha qoyskiisa.
Waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa ciyaaryahan si fiican kubada ugu xaragooda marka uu garoonka ku jiro islamarkaana xawaaro sare leh, waxaana lagu naaneesi jiray “Kaka Talaabo dheereeye”.
“2007-dii waxay ahayd waqtigii ugu muhiimsanaa aniga ahaan, waxaana gaaray meeshii ugu horeysay, kadib markii aan hanto koobab iyo waliba abaalmarino shaqsi ah,” ayuu Kaka ku sheegay wareysi uu MARCA siiyay.
“[Inkastoo ay jireen sanado kale oo fiican, hadana 2007-dii wuxuu ahaa sanad aanan marnaba la aamini karin,” ayuu hadalkiisa ku daray.
Mar la su’aalay sanadkiisii ugu xumaa ayuu ku jawaabay: “Kadib koobkii aduunka 2010, markii aan sanadkii labaad aan joogay Real Madrid, waxaan galay Qaliin Jilibka ah, mana garan karin goorta aan soo noqon karo.
“Waxay ahayd waqti xaad u adag, waxaana xiligaas kooxda joogay macalin cusub, waxayna ahayd sanad aad iigu adag aniga,” ayuu sii daba dhigay.
“Waxaa jira waqti kale oo adag, sida markii aan ka tegay Madrid oo aan aaday Milan, waxaan doonayay xiligaas inaan ka qeyb qaato koobka aduunka 2014 oo aan metalo qaran-keyga, laakiin kulankii ugu horeeyay ayaan dhaawacmay.
“Waxaan la hadlay macalin [Carlo] Ancelotti, waxaana fahmay fursadaha igaaga banaan kooxda, sidaas ayaana ku go’aan saday inaan kooxda ka tago,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, ciyaaryahan Kaka.
AC MilanKakaReal Madrid
WARBIXIN: Barca Oo Qarka U Saaran Inay Cagta Mariso Rikoor Weyn Oo La Sameeyay 38-sano Ka Hor